Scotland na obodo ya | Akụkọ Njem
Scotland na obodo ya
Mariela Carril | | Ido Scotland
Mmadu na eche Ido Scotland ozugbo ọ na-ahụ ụmụ nwoke na sket, akpa na ugwu ugwu. Ekwenyere m na onyinyo ahụ anyị niile kerịta na Scotland bụ nke ọmarịcha ugwu ya mara mma. Ugwu ugwu Scotland mejupụtara otu n’ime mpaghara akụkọ ihe mere eme nke obere obodo a n’ime England, mana ọbụghị naanị ihe anyị nwere ike ịmata ebe a.
Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịkagbu onyinyo kpochapụwo nke Scotland, ụdị Robert Wallace dị na Corazón Valiente, anyị nwere ike iji ya dịka "nko" iji gaa ma chọpụta mba a magburu onwe ya, ọgaranya na akụkọ ntolite, ọdịbendị, gastronomy na ala. Leekwa oke ala mara mma! Leekwa akụkọ ọ bụ! Na Scotland, na ugwu ugwu dịka ọmụmaatụ, ọdịbendị nwere akara Celtic doro anya ma sie ike. N’ezie, n’akụkụ a nke obodo a ka na-asụ Gaelic karịa asụsụ Bekee, mana taa kaadi akwụkwọ ozi Scottish nwere ọdịdị ala, omenaala na ọtụtụ obodo.
Nke ahụ ziri ezi, n'ime Ido Scotland ala dị iche iche, ọbụlagodi mgbe mmadụ na-eche echiche karịa ihe ọ bụla nke isi awọ na ọdọ mmiri ndị a ma ama, ndị ama ama lochs ya na agwaetiti, osimiri na gịnị mere, nnukwu anụ. Obodo ndi mara mma, ihe ncheta, ulo ochie, agha ochie, nka di iche-iche, obere na obodo ochie na otutu ihe ndi ozo - ndia bu ihe ebube ndi ala Scotland dobere anyi.
N'oge ndị ọzọ, anyị ga-ekwu okwu banyere nlegharị anya ndị njem nleta ọ bụla, mana taa, m ga-achọ ikwu maka Obodo Scotland. Onye ọ bụla nwere akụkọ ihe mere eme ya, amara ya, ụzọ ya na njem ndị njem. Nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ ndị nke kachasị amasị gị iji wuo a Scotland njegharị nlegharị anya n'oge njem ọzọ gị.
Obodo ndị Scotland
Efee Edinburgh, isi obodo Scotland, ị chetara obodo ọ bụla ọzọ? Eziokwu bu na isi obodo kacha ewu ewu na nke onye njem nleta obula ma oburu na ha enweghi obere oge ileta Great Britain. Mana obere ụbọchị ole na ole enwere obodo ndị magburu onwe ha iji gbasaa ihe ọmụma anyị banyere Scotland, ọdịbendị ya na akụkọ ntolite ya. Aberdeen, obodo dị n’etiti akụkọ ihe mere eme na nke oge a nke mere ka ọ pụta ìhè. O nwere otutu ulo oru ihe mgbe ochie, ufodu metutara ya nnukwu akuko mmiri, ma o nwekwara ogige mara mma na ubi na oke osimiri nwere oke osimiri. Iri azụ na azụ, ọ bụ ebe kachasị mma.
Otu n'ime obodo kachasị ama ama na Scotland, ọbụnakwa bụrụ isi obodo ya Na-emegharị. N'ime etiti bụ Stirling Castle, ụlọ nke Mary, Queen of Scots, yana ụlọ nzukọ ya, ụlọ ndị eze, Nnukwu Halllọ Nzukọ na ụlọ ụka. Ọ na-enyekwa nnukwu echiche nke obodo. Na mpụga na-emi odude Ihe Ncheta Mba nke Wallace, saịtị nke na-achịkwa ọdịdị ala na nke ahụ, n'ezie, na-egosipụta akụkọ ifo na ụfọdụ ajụjụ Mel Gibson weere na fim ogologo oge gara aga. Enwere Loch Lomond na Trossachs, nke dị ọkara ọkara awa, iji kwụpụta, ma ọ bụrụ na ịnọ n'abalị Stirling nwere ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ nri.
Glasgow enye edi n̄kponn̄kan obio ke idụt oro. Ekwadoro m ka ị banye na bọs ndị njem na-elekwasị anya n'ọtụtụ ebe ndị njem nleta n'obodo ahụ. Miss gaghị agbaghara ndị Ogologo ụgbọ mmiri, na akụkọ ihe mere eme nke igodo obodo ahụ, Riverside Museum of Transportation and Travel, ụlọ mara mma nke nwere ihe karịrị puku atọ ihe ngosi n'etiti ịnyịnya ígwè, trams na ndị ọzọ. Ọ na-agbakwunye ogige, ogige na ebe a na-egwupụta ihe osise na etiti ya na ụlọ mmanya, ụlọ nri na ọtụtụ ụlọ ahịa.
Inverness Ọ bụ isi obodo ugwu Scotland. Ọ dị n'akụkụ Osimiri Ness ma dakọtara ọnụ nke mere na ọ dị mfe iji ụkwụ aga. Have nwere Ogige Botanical mara mma, Museum na Art Gallery, ọmarịcha ahịhịa mara mma nke dị mma maka ịzụ ahịa ncheta, Inverness Castle na Katidral St. Andrew bụ ndị kachasị mma. N'ikpeazụ bụ Perth, bụ obodo ọhụụ ebe ọ dị kemgbe 2007, n'agbanyeghị na ọ bụbu isi obodo Scotland n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ ise.
Perth Ọ nwere ọtụtụ akụ na ụba na ụkpụrụ ụlọ, n'okporo ámá ndị jikọtara ọnụ na ụdị Georgian n'akụkụ ụfọdụ, ubi, ogige ntụrụndụ ọha buru oke ibu na n'okporo ámá ndị a na-agagharị agagharị, High Street, nke nwere ebe a na-ere kọfị na ụlọ mmanya iji zuru ike ma na-emekọrịta ihe. N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere Edinburgh, isi obodo ugbu a. N'ebe a, ị ga-agarịrị Edinburgh Castle na Nkume nke Akara Aka (ebe a na-ekpu ndị eze Scottish niile), gbagoo na Castle Rock iji tụlee obodo ahụ site na mma dị mma, banye na bọs, gaa na nzuko omeiwu Scotland, National Museum of Scotland na gịnị mere, na Zoo.
Ido Scotland Ọ bụ ama maka wiski ya ka ị nwee ike ịdebanye aha ya Scotch Wiski Ahụmahụ ịmụta banyere distillation nke ihe ọ drinkụ drinkụ a, ma nwalee otu iko! ma ọ bụ gaa ahịa na obodo ahụ dum. Dịka ị pụrụ ịhụ, akụkụ a nke Great Britain mara ezigbo mma. Anaghị m akwado ọtụtụ ihe na ị ga-amalite njem nke ịmara ya n'oge oyi ebe ọ bụ oyi na nke ahụ na-agbagwoju ọtụtụ, dịka ọmụmaatụ, ịgagharị obodo niile ma ọ bụ ịga leta mkpọmkpọ ebe ma ọ bụ ọdọ mmiri ndị dị anya, mana na mpụga nke ahụ siri ike oge Scotland na-echere gị na oghe ogwe aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ido Scotland » Scotland na obodo ya